Nagarik News - लोकतन्त्रको ह्याप्पी बर्थडे
Wednesday 19 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	ब्लग	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / ब्लग / लोकतन्त्रको ह्याप्पी बर्थडे
लोकतन्त्रको ह्याप्पी बर्थडे	24 Apr 2013 बुधबार ११ बैशाख, २०७०
खानपिनको कूटनीति जुनी फेर्दै वसन्तपुर झलनाथका १५ गीत फेरिएकै हो नेपाली समाज? मार्खेजको एकान्तवास पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका लागि नयाँ परिभाषा र …कन्टेन्ट' बनाउने उद्घोष गरेका छन्। उनीसँग लामो समय सँगै रहेका एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भने नेकपा स्थापना दिवसको छेक पारेर सोमबार राजधानीमा बोल्दैथिए, …समाजवाद आएको झुपडीले थाहा पाउनुपर्छ। काठमाडौंका दुई सम्भ्रान्त महिलाले नोकरीमा बढुवा पाएर हुँदैन।' कमरेड, यहाँ समाजवाद त के, लोकतन्त्र आइसकेको सात वर्ष भइसकेछ। तपाईंहरु सरकारमा पुगेको त झुपडीलाई थाहा छ। लोकतन्त्र आइपुगेको भने अझै थाहा छैन। सिद्धान्तै छैन, कसरी बढ्ता?एमाले नेता घनश्याम भूसाल गम्भीर सैद्धान्तिक अध्ययन र विश्लेषणका लागि चर्चित छन्। एमालेमा उनले पारित गराउन नसकेको नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण एमाओवादीको हेटौडा अधिवेशनले पारित गरेको गाइँगुइँ सुनिन्छ। कार्कीसँगै उभिएका उनी भन्दैथिए, …कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा अलि वैचारिक छलफल चलाउन खोज्यो भने बढ्ता सैद्धान्तिक भएको भनी टिप्पणी गर्ने चलन छ। हामीकहाँ त सिद्धान्तै छैन, त्यो कसरी बढ्ता भयो?'भूसालले यसो भन्दैगर्दा खचाखत दर्शकदीर्घामा बसिरहेकी एक महिला कमरेड कुरा सुन्न छाडेर छेउछाउका कमरेडहरुलाई श्रीमद्भागवत सप्ताह महापुराणको निमन्त्रणा कार्ड बाँडिरहेकी थिइन्। एमाले नेता मदन भण्डारीमाथि आधारित फिल्म …दासढुंगा' निर्माण गरेका मनोज पण्डित छेवैमा बसेर टुलुटुलु हेरिरहेका थिए। पंक्तिकारलाई भूसालको कुरा दोहोर्‍याउन मन लाग्यो, …सिद्धान्तै छैन, कसरी बढ्ता भयो?'भ्रष्टाचारको कुराएमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुब्न लागेको भनी हेटौडा महाधिवेशनमा बोलेका थिए। अध्यक्षको प्रतिवेदन पढ्दा पार्टीमा एकसेएक भ्रष्टाचारी छन्। अमिक शेरचन नेतृत्वको भ्रष्टाचार छानबिन टोलीले खोज्दा भने एउटा पनि भ्रष्ट भेटिँदैन। यो के भएको? पोलिटब्युरो सदस्य कार्कीले भने, …हाम्रो पार्टीमा मौलाएको भ्रष्टाचारको विरोध गर्‍यो भने कमरेडहरु हाँस्न थाल्छन्। जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन।'पंक्तिकारले धेरै कुरो बुझेन। केवल यत्ति बु‰यो– जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ भनेर रिपोर्ट आएका आयै छन्। त्यसैले यहाँ लोकतन्त्र छैन। अब प्रश्न छ, लोकतन्त्र नै नभएको यो अभागी देशमा कति धेरै लोकतन्त्र दिवसहरु हुन्? कतै लोकतन्त्र दिवसका नाममा भ्रष्टाचार नै भइरहेको त छैन?एमाले पार्टी नै छैन? प्रभावशाली एमाले नेता वामदेव गौतमको गढ मानिने बर्दिया पुगेपछि प्रचण्डलाई अचानक तत्वबोध भयो, …एमाले भन्ने पार्टी नै छैन।'सात दलसँग आठ वर्षअघि बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको एक साताअघि एमालेका गौतमसँगै छबुँदे गरेका प्रचण्डलाई अचानक कसरी यस्तो ज्ञान प्राप्त भएछ! जो धरतीमा छँदै छैन, उसको दलबाट बनेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छ दिन देश ठप्प पारे उनले। सोही दलका अर्का नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे उनले। धरतीमै नभएको दलसँग आगामी चुनावमा माथापच्ची गर्नुपर्ला भन्ने चिन्ताले उनी आत्तिएका त होइनन्? त्यही भएर राम कार्कीको भाषामा सप्तरंगी मधेसवादी दलसँग मोर्चा बनाएर क्रान्ति गर्नुपरेको होला। खासमा, कांग्रेससँग मिलेर मोर्चा बनाउने एमाले प्रस्तावले प्रचण्डलाई झस्काएको हो। एमालेलाई पनि किन कांग्रेससँग लहसिनु परेको होला? भूसालको जवाफ रोचक थियो, …मधेसवादी र जातिवादीसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको जग हल्लाउने मोर्चाबन्दी तपार्इंहरुले थाल्नुभयो। हामीलाई राष्ट्र जोगाउनु थियो, त्यसैले कांग्रेससँग मिलेर जान हामी नै हतारिएका हौं।'कमरेड प्रचण्ड, एमाले पार्टी नै नरहे बरु केही छैन। राष्ट्र नै नरहे हामी कहाँ जाने?ट्वीट यातायातराजधानीमा सुरु भएको साझा यातायातको पक्षमा केही दिनयता असंख्य भोट खसिरहेका थिए। धेरैले दोहोर्‍याएर ट्वीट–भोट पनि हाले। परिणाम के भयो, साझाका विपक्षीको जमानत जफतमात्रै भएन, अस्तित्व नै लोप भयो। तर अचम्म, हिजो दिनभर साझा यातायातबारे कसैले पनि ट्वीट गरेन। Tweet प्रतिक्रिया
ब्लग	नागरिकमेरो मधेसी साथीमेरो पहाड घर नुवकोटको थान्सिङ भन्ने ठाउँ हो रे। तर बर्सौ पहिले मेरो हजुरबुबा नुवकोटबाट तराई झर्नु भएकाले मेरो जन्म...	प्रशान्त लामिछानेमाओवादीले जनतासँग एकता गर्ला?'हाम्रो एकताले सबैलाई चकित बनाएको छ,' माओवादी घटकहरूको एकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, 'पार्टीलाई एक नम्बर बनाउँछु।' हलमा ताली बज्यो।...	नागरिकओलीजस्तै प्रचण्ड, देउवा पत्तासाफ हुने त होइनन् ?स्व. मनमोहन अधिकारीको जनताप्रति उत्तरदायी शासनपद्धति, जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको दूर-दृष्टिको धरातलमा एमाले अहिलेसम्म अडिरहेको कुरा अहिलेका अध्यक्ष तथा डन...	भर्खरै...